ब्यापार ध्वस्त भएपछि बीमा कम्पनीका सीइओहरु बैंकरलाई धम्काउँदै, ११.१३ प्रतिशत ब्याज लिँदैः बीमा समिति बेखबर - Aathikbazarnews.com ब्यापार ध्वस्त भएपछि बीमा कम्पनीका सीइओहरु बैंकरलाई धम्काउँदै, ११.१३ प्रतिशत ब्याज लिँदैः बीमा समिति बेखबर -
मङ्लबार, असार १४, २०७९
ब्यापार ध्वस्त भएपछि बीमा कम्पनीका सीइओहरु बैंकरलाई धम्काउँदै, ११.१३ प्रतिशत ब्याज लिँदैः बीमा समिति बेखबर
Sticky Breaking News
बिहिबार, चैत्र १७, २०७८
नेपालका बैक र वित्तिय संस्थाहरुमा पछिल्लो समय चर्को तरलता अभाव भएपछि कर्जा प्रायः बन्द नै छ भनदा फरक पर्दैन । बैंकहरुले कर्जा बन्द गरेसंगै बीमा कम्पनीहरुको ब्यापार समेत ध्वस्त भएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बैंक, वित्तिय र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई यतिबेला व्यवसाय बढाउनेभन्दा पनि कसरी जोगाउने भन्ने तनाव भएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । बैंकहरुलाई भएको ऋण नघटाइ कर्जा–निक्षेप अनुपात भएको ब्यापार (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा तल राख्नु पर्ने दबाब छ भने बीमा कम्पनीहरुलाई गरिरहेको व्यापारलाई थेग्नु छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमाको व्यापार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणसँग सम्बन्धित भएकाले बैंकहरुको ऋण घट्दा वा नबढ्दा बीमा व्यवसाय ध्वस्त भएको भेटिएको छ । हेक्का होस् ।
अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । औसत सीडी रेसियो पनि ९२ प्रतिशत हाराहारी छ । असार मसान्तसम्म बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नु पर्ने बाध्यता पनि छ त्यैले कर्जा अहिले ठप्प झै छ । सीडी रेसियो तल झार्नका लागि बैंकहरुले कि त निक्षेप बढाउनु पर्ने नभए ऋण घटाउनु पर्छ । निक्षेप बढ्ने होइन उल्टो घट्ने अवस्था छ । किनभने सरकारले स्थानीय तहमा दिएको बजेटलाई असारसम्म मात्र निक्षेपमा गणना गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । कुल विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना पाउने व्यवस्था छ भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा ल्याउन ऋण घटाउनु पर्ने अवस्था छ । ऋण घटाउन क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा बीमा बजार थला परेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अहिले बीमाले बैंकलाई निक्षेप दिने र बैंकले त्यो पैसा ऋण दिएर त्यसको बीमा निक्षेप गर्ने कम्पनीमा गराउने रणनीति लिन थालेका छन्,’ एक बीमा कम्पनीका व्यवस्थापकले भने, ’तर यसले पुरानो व्यापारलाई धान्न गाह्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको व्यापार आधार ठूलो भइसकेकाले अहिले थेग्न सके मात्र पनि ठूलो उपलब्ध हुनेछ नि ।’
’आफ्नो व्यापार थेग्नका लागि सर्तहरु राख्नु स्वाभाविक नै हो कि कसो ? निक्षेप दिने व्यापार नआउने भयो भने त हामीलाई फाइदा भएन । यसपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्न देखिन्छ । बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा नदिएपछि गाडी लगायत मोटरसाईकल खरिद कम छ । यी साधनको बीमा नहुँदा निजीवन बीमा कम्पनीहरु तनावमा छन् भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउने ठूलो मात्राको घरजग्गा
एक बैंकका सीइओले पंक्तिकारलाई भनेः– जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने बैंकहरुसँग धम्क्याएर नै बढी ब्याज लिन थालेका छन् नि । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, नवीकरण भएको निक्षेपमा मात्र निर्धारितभन्दा ०.१० प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाइन्छ । ’तर, बीमा कम्पनीले नभए दिन्न भन्दिएपछि राष्ट्र बैंकको आँखा छलेर भए पनि नयाँलाई पनि नवीकरण सरह ब्याज दिएर निक्षेप उठाउनु लागी गरेका छौ नि । अहिले साधारण व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले योभन्दा एक प्रतिशत बिन्दु कम ब्याज पाउँछन् अर्थात १०.०३ प्रतिशत । नवीकरण गर्नु परे ०.१० प्रतिशत बिन्दु बढी अर्थात १०.१३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् । अहिले बीमा कम्पनीहरुको नयाँ निक्षेपलाई पनि बैंकहरुले नवीकरण सरह १०.१३ प्रतिशत ब्याज दिएको भेटिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् ।
बैंकरले यो निक्षेप पनि ब्यापार दिने सर्तमा मात्र पाउँछन् । यदि व्यापार दिन नसके बैंकले निक्षेप पाउँदैनन् । ’आफ्नो व्यापार थेग्नका लागि सर्तहरु राख्नु स्वाभाविक नै हो कि कसो ? निक्षेप दिने व्यापार नआउने भयो भने त हामीलाई फाइदा भएन । यसपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्न देखिन्छ । बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा नदिएपछि गाडी लगायत मोटरसाईकल खरिद कम छ । यी साधनको बीमा नहुँदा निजीवन बीमा कम्पनीहरु तनावमा छन् भन्दा फरक पर्दैन । यति मात्रै होइन बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पाउने ठूलो मात्राको घरजग्गा कर्जाको बीमा गरिन्छ । कर्जा बन्द भएपछि यसबाट पनि बीमा कम्पनीलाई आम्दानी भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
आइएमई लाइफ इन्श्योरेन्सको बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड २०२१ सम्पन्न
सुरूङ्गा, बनेपा र म्याग्दीमा ‘युवासँग महालक्ष्मी लाईफ’ कार्यक्रम सम्पन्न
लुम्बिनी विकास बैंक नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्समा आवद्ध
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नयाँ बीमा योजना, ‘सुनिश्चित आय (परिवार आय लाभ)’
२४ बैंक र १३ बीमा कम्पनीले एफपीओ र सेयर लिलामीमा भएको आम्दानीको कर तिरेनन्
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा भरतपुरको विजयनगर
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा पानी, जुस र डस्टविन वितरण
क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने समितिको चेतावनी